Global Voices teny Malagasy » Ny toeran’ny media citoyen eto Madagasikara · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Mey 2010 23:08 GMT 1	 · Mpanoratra Lova Rakotomalala Nandika miora
Sokajy: Madagasikara, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fampandrosoana, Fifandraisana iraisam-pirenena, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Tontolo_iainana, Zon'olombelona
Maro zavatra notantaraina tokoa ny sehatry ny seraseran'olotsotra teto Madagasikara. Nitombo tsikelikely ny tontolon’ny blaogy teto Madagasikara tao anatin'ny taompolo farany, nitolona tokoa hanandratra ny feony mandra-pahatongan'ny krizy politikan'ny 2009 . Niteraka tinady goavambe ny fizotran'ny toe-draharaha niova haingana dia haingana mitaky ny vaovao farany mba hifanaraka amin’ny toetr’andro ka nahitana fiforonana tontolon’ny blaogy iray mba hampisehoana ny fahaiza-manaon’izy ireo na dia efa mivandravandra aza ny fanamby miandry.
Na dia apetraka ara-teorika ho mifandray amin’ny alalan'ny hosina mampalaky serasera EASSy sy LION  aza i Madagasikara dia mbola maro ny faritra manerana ny firenena no saro-toerana eo amin’ny fampiasana aterineto noho ny tsy fahampian’ny fotodrafitrasa sy halafosam-bidin’ny fidirana amin’ny aterineto (1.5%-n’ny mponina fotsiny no mampiasa aterineto ny taona 2009). Araka izany dia azo lazaina ho mbola tsy mahatanteraka ny andraikiny eo amin’ny fampanjakana eo amin'ny vahoaka ny fampitam-baovao / serasera ny aterineto mandra-pampiasan’ny Malagasy maromaro kokoa azy. Tsy azo lavina fa niakatra izay tsy izy ny fampiasana ny fitaovam-piseraserana amin’ny alalan’ny aterineto teo anivon'ny mponina an-drenivohitra, indrindra indrindra nandritry ny krizy politikan’ny taona 2009.
BBC , CNN , Global Post , France 24 , IRIN News , Le Monde , The New York Times  sy The Wall Street Journal .
(Razily mpanohitra nosamborin’ny foloalindahy tamin’ny volana Martsa 2009 farany teo: naka ny sary: Radotiana )
Olona mahery ny zato no niharan-doza avy hatrany tamin’ity krizy tsy nitsahatra ity. Nisy tatitra maro momba ny fampijaliana, sy fisamborana olona tsy mitombina  ihany koa. Ny famantarana voalohany ny nisian'ireny trangan-javatra ireny dia noho ny tatitra avy amin'ireo blaogy manokana sy hafatra fohy nalefa avy amina plateforme toy ny Ushahidi . Setrin’izany, nisy fandaharana  (fr) miresaka ny zon'olombelona nalefa tao Madagasikara, ny Amnisty International dia nanao fikarohana  ary namoaka tatitra lava dia lava tamin’ny volana febroary 2010. Nanameloka ny fandikan-dalàna  ihany koa ny fikambanana iraisam-pirenena .
Ohatra tsara azo raisina mba hisian’ny fiovana, maneho ny fahaiza-manaon’ny olontsotra mpampita vaovao ny tatitra momba ny fivarotana bolabola tsy ara-dalàna  (tapitrisa maromaro amin’ny vola dolara amerikana no vidiny) sy ny fanimbàna ny saha voajanahary fitsangatsanganana ananan'i Madagasikara .
Namoaka tatitra , sary  ary sarintany “interactifs”  (Google Maps) momba ny fitrandrahana ny bolabola sy ny fanapahana ny ala ireo fikambanana mpiaro tontolo iainana (Wild Madagscar , Global Witness ary EIA ) ary vao mainka naparitaka  sy nadikan'ireo olom-tsotra mpampita vaovao . Ny fanangonan-tsonia tanaty aterineto  mba hanaikana ireo vondrona iraisam-pirenena samihafa hanakana ny fanaovana trafika an-tsokosoko dia nahavoriana sonia teo amin'ny 580,000 teo. Ny Antenimiera Amerikana dia nandany volavolan-dalàna  mandrara izay mety ho vokatra avy amin'ny bolabola avy any Madagasikara ary farany ny Governemanta Malagasy dia namoaka lalàna mampiato ny fanondranana bolabola. Na dia mbola tena mampisalasala aza ny fanarahana ireny fandraràna ireny amin'izao fotoana izao.
Olana iray hafa ho ana mpitoraka blaogy Malagasy maro ny lalana izoran'ny fifaneraserana/fifampiresahana amin’ny alalan’ny aterineto . Efa be loatra ve ny vaovao ary indraindray aza dia mifanao atsimo sy avaratra ny resaka izay mety handoaka ny fandrosoan'ny tontolon-tserasera mba ho matotra kokoa ny fiaraha-monina niomerika? Mpitoraka blaogy maro no nilaza ho leon'ny fironan'ny aterineto gasy diso tafahoatra mankany amin’ny resaka politika, ka maniry ny hiverenan’izany ho any amin’ny fampandrosoana ny firenena, tsy asiana fijerena ny hoe iza avy no ao anatin’ny fitondrana amin’izao fotoana izao.
Ity lahatsoratra ity dia ampahany anatin’ny Global Voices Summit  momban’ny fivoaran’ny media-n'ny olom-pirenena .
- Ariniaina , Andrydago , Avylavitra , Fijery , Jentilisa , Radotiana , Madafan , Mada initiatives , Malagasy Miray , R1lita , ary Reflexiums .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2010/05/15/5989/
 krizy politikan'ny 2009: http://www.foko-madagascar.org/2009/03/17/citizen-media-the-voice-of-madagascar-to-the-world-thanks-to-foko-bloggers-activism/
 mifandray amin’ny alalan'ny hosina mampalaky serasera EASSy sy LION: http://www.itu.int/ITU-D/ict/newslog/EASSy+Lands+In+Madagascar.aspx
 fisamborana olona tsy mitombina: http://whereisrazily.wordpress.com/
 ny Amnisty International dia nanao fikarohana: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/madagascar-killings-must-be-investigated-and-perpetrators-brought-justice
 fikambanana iraisam-pirenena: http://www.america.gov/st/democracyhr-english/2010/January/20100115174058WCyeroC0.9173199.html
 fivarotana bolabola tsy ara-dalàna: https://globalvoicesonline.org/2009/12/07/madagacars-forests-decimated-for-460000-a-day/
 sarintany “interactifs”: http://news.mongabay.com/2010/0128-madagascar.html
 Global Witness ary EIA: http://www.globalwitness.org/media_library_detail.php/939/en/environmental_groups_call_on_french_shipping_compa
 olom-tsotra mpampita vaovao: http://reflexiums.wordpress.com/2010/04/05/madagascar-hat-et-bois-precieux-mensonge-et-compagnie/
 fanangonan-tsonia tanaty aterineto: http://www.rainforestportal.org/shared/alerts/send.aspx?id=madagascar_landgrab
 Antenimiera Amerikana dia nandany volavolan-dalàna: http://www.mygov365.com/legislation/view/25199
 fifaneraserana/fifampiresahana amin’ny alalan’ny aterineto: http://malagasymiray.net/2010/04/27/malagasy-miray-as-a-reliable-and-objective-citizen-media/
 fivoaran’ny media-n'ny olom-pirenena: https://summit2010.globalvoicesonline.org/category/citizen-media-rising-session/